landminen Archive - Kodzero dzevanhu & Chiedza Art na ∴ PixelHELPER Foundation
Kuderedzwa panzvimbo peminda yeminda kupesana nekuchinja kwemamiriro ekunze
Kudonhedza madhiri emuti nembeu dzakapedza uye fetiraiza
Kutora miti panzvimbo pezvimbambaira. Pepanhau rakakura kwazvo muMorocco rakashuma nhasi pane zvatakakumbira kuParamende yeAustralia kukumbira Mambo weMoroccan kuti atipe ndege yehumende yeHercules-C130 kuitira kuti tigone kuishandura kuti ivezve masango eMorocco nemasango eAustralia. Fekitori diki pano panzvimbo yedu yeMoroccan inofanirwa kugadzira matavi emuti anodonhedzwa. Asi hapana chatingaite pasina rubatsiro rwamambo weMorocco. Sezvo asina kuita tsamba dzedu dzekupedzisira, isu hatifungidzire chero mikana, asi isu tinofara nezve zvakanaka zvinoshamisa.
Miti madhiri kubva ku3 printer
Kuderedzwa panzvimbo peminda yeminda kupesana nekuchinja kwemamiriro ekunze April 21st, 2020Oliver Bienkowski